Myanmar Defence Weapons: တိုးတက်ဆန်းသစ်လာသော လက်ဖြောင့်ပစ်ရိုယ်ဖယ်များ -၁
hein December 26, 2011 at 8:53 PM
ကို mm ရေ.. ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်မှာ စနိုက်ပါတပ်ဖွဲ့ ဆိုတာ သီးသန့် ကို ရှိသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ..ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ရဲ့ ပထ၀ီ အနေ အထား အရကို က ပုန်းလျှိုကွယ်လျှိုး ပျောက်ကြားလို မျိုး စစ် ဗျူဟာတွေ အတွက် အရမ်းကောင်းတာကိုးဗျ..များသောအားဖြင့် သစ်ပင် သစ်တောတွေရယ် တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေရယ်တွေဟာ ခု တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ခိုက်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေ အကြိုက်ပဲပေါ့ဗျာ. သူတို့ က ပုန်းလျှိူးကွယ်လျှိုးနဲ့ ဆော်တာဗျ..အဲတော့ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းတွေအတွက် စနိုက်ပါနဲ့ ကာကွယ်တာ ကလည်း ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော် အတွက် အရေးကြီးတယ်ဗျ..ဥပမာဗျာ တပ်မတော် က လက်နက်ကိုင် စခန်းတစ်ခု ကို သိမ်းတော့မယ်ဗျာ.. အဲ တော့ ထိုးစစ်လုပ်ဖို့ စစ်သားတွေက တက်ရပြီ.(သံချပ်ကာတွေပါရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ဗျာ. ဒါပေမဲ့ လည်း နယ်မြေကန့် သတ်ချက် က ရှိသဗျ..တောင်ထူတဲ့ နေ ရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တောနက်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်..ဒီကားတွေသွားမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ခြေကျင်ပဲ ချီတက်ရမှာပါပဲ) အဲတော့ဗျာ ထိုးစစ်လုပ်ဖို့ တပ်မတော်သားတွေ က တက်လာပြီဗျာ..ဒါပေမဲ့ ဟိုဖက်က လက်နက်ကိုင်တွေ က ဒီနေရာတွေ ကို ကျွမ်းကျင်ပြီးသားဗျာ.သူတို့ က ဒီဒေသမှာပဲ ကျက်စားနေတာ..ဒါကြောင့် တပ်မတော်က မြေပုံတွေ နဲ့ လာတယ်ပဲထားဦး.. ကျိန်းသေတာကတော့ ဟိုဖက်က ပိုပြီး နယ်မြေကျွမ်းတယ်ဗျာ.. ဒီတော့ လာတဲ့လမ်းမှာ စောင့်တိုက်တာမျိုးတွေ ရှိလာပြီ..ပြောက်ကျားတိုက်တာမျိုးတွေ ရှိလာပြီဗျာ..ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ခံတော့ခံရဦးမှာပဲ ဗျာ .. နည်းနည်းများများပေါ့.. အဲတော့ဒါကိုကာကွယ်ဖို့ ကဗျာ...ထိုးစစ် မစ ခင်မှာ အဲဒီဒေသကို စနိုက်ပါသမားတွေနဲ့ အထူးတပ်ဖွဲ့ ဝင်တွေကို နည်းနည်း စီ အဖွဲ့ ငယ်လေးတွေ ဖွဲ့ ပြီးထည့်ပေးလိုက်.. ကိုယ်က သူ တို့ ကို အရင်ဆုံး ပျောက်ကြားနည်းနဲ့ ရှင်းထားမှာဗျ.. ကိုရီုးယားကျွန်းဆွယ် စစ်ပွဲ တုန်းက မြောက်ကို ရီးယား ကွန်မန်ဒိုနဲ့ စနိုက်ပါ 30လောက်က အမေရိကန်စစ်သား 100လောက်ကို သုတ်သင်ခဲ့ တယ်ဆိုပဲ..(မြောက်က တောင်ကို ထိုးစစ်ဆင်တုန်းကပါ) အဲဒီတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ တွေနည်းနည်းတော့ ဖြုံကုန်မှာဗျ..စိတ်တွေ လည်း ခြောက်ခြားကုန်မှာ.. ဒီတော့မှ တပ်မတော်က ထိုးစစ်စ.. စနိုက်ပါနဲ့ ကာကွယ်မှုတွေ ကိုလည်းမရပ်ပဲ တပ်ဦးကနေ လိုက်ပြီးတော့ ကာကွယ်.. ဒါဆိုရင်တော့ ကျိန်းသေလောက် တယ် အကျအဆုံးနည်းစွာ နဲ့ စခန်းသိမ်းနိုင်မယ်ဆိုတာ...ကျွန်တော် စဉ်းစားထားတာလေးပါဗျာ.. ပြည့်စုံမှုတော့မရှိလောက်ဘူးဗျ.ကျွန်တော် အဲဒါလေးကို အရမ်းပြောချင်နေလို့ကို m m ရေ
kong December 27, 2011 at 8:15 AM
ကိုhtetခင်ဗျာ၊တပ်မတော်ရေမှာရေတပ်သင်္ဘောများအားတည်ဆောက်ချင်တိုင်းတည်ဆောက်designရေးဆွဲချင်တိုင်းရေးဆွဲ၍မရပါခင်ဗျာ။နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးမဟာဗျူဟာplanအရမည်သို့သောဖရီးဂိတ်အမျိုးအစားတည်ဆောက်ရမည်ကိုထိုစဉ်ကတပ်ချုပ်မှအကြမ်းဖျင်းညွန်ကြားပါတယ်၊ထိုညွှန်ကြားချက်နှင့်ချပေးနိုင်သောဘက်ဂျက်အတွင်းplanများရေးဆွဲခြင်းdesignရေးဆွဲခြင်းပြုရပါတယ်၊Planများရေးဆွဲရာတွင်လည်းcontingency plan, shell expansion plan, general arrangement plan and frame arrangement planစသည်ဖြင့်planပေါင်းများစွာနဲ့အတိအကျရေးဆွဲရပါတယ်frameများအားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဘယ်လေက် space ထားရမယ်angle degreeဘယ်လောက်ထားရမယ်ဆိုတာတွက်ချက်ရတဲ့အပြင်လက်နက်များ၊super structureများ၏weightကြောင့်frameတစ်ချောင်းစီတွင်သက်ရောက်အားstressကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်bending moment shearing forceမည်မျှဖြစ်လာမည်ထိုအတွက် thicknessနှင့်spaceအားတွက်ချက်ရပါတယ်။ပုံဆွဲ၊ပုံပြင်များnaval architectများဖြင့်အထပ်ထပ်ညှိနှိုင်းပြီးအထက်အဆင့်ဆင့်ကိုတင်ပြရပါတယ်။
ကျွန်တော်သိချင်တာကဒီဇိုင်းမှားနေတယ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုပါသလဲခင်ဗျာ၊ကျွှန်တော်သိသလောက်ပြောရရင်hull designကောင်းပါတယ် stabilityအရပြောရရင်အရေးကြီးတဲ့ metercentric height( GM )ဟာeven unballast conditionနဲ့all weatherမှာoperationလုပ်နိုင်တဲ့sufficient GMရှိပါတယ်၊Frigate standard ability and featureလည်းရှိပါတယ်။
ဒီသင်္ဘောမှာအဓိကအားနည်းတာကဒီဇိုင်းအောက်တာ၊hangarမပါတာနဲ့air defence missileနဲ့fire control radarသုံးခုမှာအားနည်းတာဒါတွေပါ၊ဒီဇိုင်းအောက်ရတာကဟိုးအရင်ဆွဲပြီးသားဒီဇိုင်းကိုအခြေခံထားလို့ပါအတိအကျပြောရရင်super structure( wheel house/bridge ရှိသောcompartment )မှာဒီဇိုင်းတော်တော်အောက်ပါတယ်ရေတပ်မှာမှီညမ်းရန်အခြားနိုင်ငံများရဲ့steath features frigateများ၏ drawingအကြမ်းများလည်းရှိပါတယ်။
hangarမပါတာ air defence missileနဲ့ fire control radarအားနည်းတာကတော့သွားလေသူကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုအမှား၊ဘက်ဂျက်ချပေးမှုမလုံလောက်တာတွေကြောင့်ပါ။
MM December 27, 2011 at 9:06 AM
ကိုkongရေ... မလာဖြစ်တာတောင် နည်းနည်းကြာနေသလိုဘဲနော်.. ရပါတယ်ဗျ ရေးပါ.. အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာ...။ ဖရီးဂိတ်ကြီးအကြောင်းအခုလို အမြင်တွေရှင်းသွားအောင်ဝေဌပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ...။
MM December 27, 2011 at 9:08 AM
ကိုheinရေ.. စနိုက်ပါတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ တကယ်ကိုလိုအပ်တာဗျ... အခုလို ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..။